जुम्ल्याहा बच्चा जन्माएर २१ बर्षकी आमा बि`तिन् । बच्चाहरुको यस्तो बिच`ल्ली, सबैले शेयर गरौं (भिडियो हेर्नु`स) – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/जुम्ल्याहा बच्चा जन्माएर २१ बर्षकी आमा बि`तिन् । बच्चाहरुको यस्तो बिच`ल्ली, सबैले शेयर गरौं (भिडियो हेर्नु`स)
दैव पनि कति निष्ठु`री । किन गरिबलाई नै चोट मा`थि चोट दिन्छौ, भगवान् । किन, यि जुम्ल्याहा नानीहरु जन्मेको ११ दिनमै उनीहरुबाट आमाको म`मता खोस्यौ ? किन ज्याला मज`दुरी गरेर खाने यि सोझा बुवालाई चोट माथि चोट दियौं ? प्रश्न सोध्छु, तर उत्तर पाउंदिन् ।
जब मैले थाहा पाएं, जुम्ल्या`हा नानीहरु पाएको केहि दिनमै २१ बर्षकी आमा बित्नु भयो रे । ती दुई नानीहरुलाई दुध खुवा`उने पैसा पनि छैन रे, भन्ने कुरा । कुदेर ती नानीहरु भए ठाउंमा पुगि हाले । नानीह`रुको लागि दुध र औषधी उपचारका लागि एक आ`र्थिक सहयोग लिएर ।